Support email info@qdruidetai.com
Inkxaso Call 86-18661631650
Wire neZilinganisi intambo End
Crosby Mini zakha Ratchet Uhlobo Layisha yokuhlanganisa Turnbuc ...
G450 HDG US Uhlobo Drop zakha Wire yamasango intambo
M16 C15 Zinc Black CR3 DIN582 Abakha bokuPhakamisa Eye nuts
Dip Hot Isefu G403 Ukophuka End ukujikajika
Isefu Screw Pin Bow nasentanjeni G209
Yenza ingxubevange Steel Red Gqiyazana Drop zakha Eye ukuphakamisa Liftin ...
Stainless Long D nasentanjeni Long Type
1. Inkcazelo Uhlobo Stainless Long D nasentanjeni Long
Material: Stainless, SS304 okanye SS316
Ifanele ukuba ukusetyenziswa kunye nokuphakamisa
2. Ingcaciso Product Uhlobo Stainless Long D nasentanjeni Long
Into: Stainless Long D nasentanjeni Long Type
Uhlobo: Uhlobo Long
Ubukhulu: ukusuka 4mm ukuya 12mm
Ukupakisha: bag PP + ibhokisi + pallet, okanye ngokutsho kubathengi '
Layisha port: Qingdao port okanye ezinye khumbi China
Shipping: ngenqanawa okanye umoya
1. Ingaba umzi-mveliso okanye urhwebo inkampani?
Siqale njenge mveliso iankile inxitywe-20 eyadlulayo yaye ngokuthe ngcembe yaba umenzi enkulu izinto zaselwandle.
Ngelo xesha, ukuba ukuhlangabezana neemfuno ezikhulayo kubaxumi bethu kwiindawo zoshishino ezintsha, siye sandisa imihlaba yethu zokulawula iiseyile hardware kunye zokubopha, yaye ezinye iintsimbi ezinxulumene ngokubeka up intsebenziswano eqinileyo kunye nezinye mveliso.
Ngoku ndinebhongo ngokuthi ukuba Rui DE www.capacitar.org © iye zichongwe umthengisi top ngekhonkco & hardware ukhetho kumantla China.
2. ibekwe phi factory yakho?
efektri yethu sise Jimo, Qingdao City, kwiPhondo Shandong, China.
Zibone bavuma ukuba kusityelela naliphi ixesha ngentsebenziswano elizayo.
3. Ziziphi izinto ntoni na unikeze?
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, ukunika zonke iintlobo izinto zaselwandle, amatyathanga, ukhetho yentsimbi, izinto zokubopha, kunye hardware ezinxulumeneyo.
4. Ingaba ukulawula njani ixabiso nomgangatho?
Ngokubeka up points zokulawula umgangatho kwaye behlola kwinkqubo nganye imveliso kunye nemigangatho engqongqo, iimveliso ezineziphene ziza kupheliswa phambi nokupakishwa nokusiwa.
Kuba mveliso iqabane, sisebenzisa inkqubo ebanzi imilinganiselo ezisemgangathweni ukuvavanya umgca yemveliso. Kwakhona iqela lethu QC abaza kuphumeza itshekhi obekelwe ukuligqiba yokujonga imveliso phambi kokuba unikezelo.
5. Kutheni na ukuba uthembeke ngaphezu kwezinye mveliso?
Thina impendulo imibuzo yakho ngoko nangoko kwiiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 veki zonke.
Sinokuba ukunika ixabiso olunokhuphiswano ngokusekelwe efanayo kwinqanaba umgangatho ngabaphathi elikhulu kucikizeko yonke inkqubo.
bathi kanye le nto uyifunayo, yaye siza sifumane isisombululo elinye-stop ukuba ishishini lakho ukuze ugcine
ixesha sakho kunye nomgudu.
6. Ndingasihlawula njani na?
Samkela 30% yentlawulo kwangaphambili &-70% phambi kokuba zithunyelwe ngentsebenziswano lokuqala, mhlawumbi yi-T / T okanye L / C.
7. Ndingalifumana njani impahla?
Neearhente yethu zothutho lobungcali, ekwaziyo iimveliso zonikezelo kumazibuko ezininzi ehlabathini lonke thina. Door-to-door nkonzo kananjalo kuxhaswa. FOB, C & F, CIF ngokuqhelekileyo kusetyenziswa amagama zorhwebo.
Welcome ukuthenga futhi kufa zethu nokuthengisa eshushu insimbi elide namakhamandela d uhlobo elide. Thina ungomnye bemveliso iimveliso zokulawula iiseyile kakhulu ngobuchule kunye aphambili kunye nabathengisi. Nceda bakhululeke ukuze ufumane isampuli simahla kwaye qhagamshelana mveliso lwethu ulwazi olubanzi.
Previous: 55T 2 1 / 2US Uhlobo Bolt Uhlobo Chain nasentanjeni G2150
European Steel Stainless SS316 Uhlobo Frame Turnb ...
M8 A2 AISI304 Stainless DIN580 bokuPhakamisa Ey ...
5/8 3.25Ton US Uhlobo Amandla High Hot Dip galvą ...
1/2 no 3/32 Thimbles intambo Uhlobo Wire European
8mm 316 Stainless DIN741 Wire intambo Umboniso
European Steel stainless Uhlobo ngamakhamandela elikhulu
Yintoni na ukusetyenziswa ngentambo yocingo umboniso?
steel stainless uqhagamshelo Thimbles
Yintoni ixabiso steel stainless Thim ...
Le zokulawula iiseyile namakhamandela ekusetyenzisweni kwe pr ...
Ukwahlukanisa izikhonkwane nokuphakamisa